Hampangatsiaka Ireo Tsikera Ny Fanombohan’ny Pôlisin’ny Aterineto Ao Shina Ny ‘Fitsirihana Ny Resaka’ · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 03 Jona 2015 16:34 GMT
Sary avy tamin'ny mpampiasa Flickr: Isriya Paireepairit (CC: AT-NC)
Ny 1 Jona, nanomboka nanao “fitsirihana ny resaka” aty anaty sehatry ny media sosialy, ireo Andiana Pôlisin'ny Aterineto Shinoa avy amin'ireo governemanta monisipaly miisa 50.
Araka ny fanambaràna avy amin'ny Minisitry ny Filaminam-bahoaka, hitsirika ireo sehatry ny media sosialy lehibe ireo pôlisin'ny Aterineto, tafiditra amin'izany ny Weibo sy ny WeChat isan'ora, mba hisorohana ny loharanom-baovao tsy ara-dalàna amin'ny fanaparitahana amin'ny anarana sy kaonty iofampizaràna “Polisy Mpitsirika ny Aterineto ary Fampiharana ny Lalàna” (网警巡查执法). Natao hitily ny “loharanom-baovao tsy ara-dalàna sy manohintohina” ireo ekipan'ny pôlisin'ny Aterineto ireo, misoroka ireo teny sy fihetsika ratsy, mandefa tatitra momba ny tranga miseho, ary miambina amin'ireo mpanao heloka amin'ny aterineto. “Hampianatra sy hampitandrina” ireo manao ny tsy mety, ary misambotra ireo manitsakitsaka ny lalàna izy ireo.
Nampiasaina indrindra tany amin'ireo tanàna lehibe, toa an'i Beijing, Shangai ary Guangzhou, ary ireo tanàna izay ipetrahan'ireo foko vitsy an'isa, ny andiany voalohany tamin'ireo ekipan'ny mpitsirika ny Aterineto. Hanomboka ny fitsirihana amin'ny Aterineto, ho an'ireo tanàna any amin'ny laharana faharoa sy fahatelo, amin'ny dingana manaraka.
Hatramin'ny taona 2008, raha nanomboka nalaza tany Shina ny Weibo, namorona kaontiny media sosialy ho azy ireo manokana ireo andiana pôlisy maro be, mba handraisana ireo fitarainana sy tatitra heloka avy amin'ireo olom-pirenena tsotra. Kanefa hatramin'izao, tsy tompon'andraikitra tamin'ny fiambenana ireo resaka amin'ny Aterineto izy ireo. Ireo mpiandraikitra sehatra fifaneraseràna matetika no tena nanao ireo sivana amin'ireo media sosialy, izay mahazo baiko avy amin'ireo governemanta isan-karazany sy ireo manampahefana amin'ny antoko, mba hanivana ireo teny mety hanafintohina ara-politika na hamafa ny kaontin'ireo mpampiasa mampisy olana. Ny ankamaroan'ireo sehatra media sosialy ihany koa dia nametraka fomba fitaterana ny loharanom-baovaon'ny fiarahamonina mba hisorohana ireo honohono ary ireo fanalàam-baràka tsy hiparitaka amin'ny Aterineto.
Nandritra ny taona maro, nanontany ary nisambotra ireo mpisera amin'ny Aterineto ireo pôlisy noho ny “fanaparitahana honohono” na “filàm-baniny sy fihantsiana korontana”. Ny teny nanamelohana ilay mpiaro ny zon'olombelona Pu Zhiqiang, no tranga vao haingana indrindra izao. Fa ny fanombohana ny fandaharan'asa “Pôlisy Mpitsirika ny Aterineto sy ny Fampiharana ny Lalàna”, dia mitaky ezaka mirindra bebe kokoa amin'ny fanamelohana ny teny aty amin'ny Aterineto.
Nasongadin'ilay fanambaràn'ny ministera mazava ihany koa ny hoe, ny taona 2015, efa nanodidina ny 758.000 eo sahady ireo ” loharanom-baovao voaràran'ny lalàna” no nofafàn'ny Andian'ny Pôlisin'ny Aterineto, tranga “heloka amin'ny Aterineto” miisa 70.000 no efa nokirakirainy. Mety vao mainka hampangatsiatsiaka ny fiantraikan'ireo fepetra raisiny amin'ireo tsikera kosa ny “firosoany hiseho masoandro” ataon'ny pôlisin'ny Aterineto.
Nilaza izao tao amin'ny Radio Free Asia ny mpanoratra tsy miankina iray, Ye Du:
Ataon'ny Fanjakana ho toy ny tany fiadiana hanaraha-maso fotokevitra ny Aterineto. Fitaovana lehibe tokoa ny Weibo sy ny WeChat ho fitakiana ny demôkrasia, amin'ny vanim-potoanan'ny media sosialy. Voadio ny Weibo ary ezaka lehibe no vita tao amin'ny WeChat noho ny pôlisin'ny Aterineto. Kanefa, mbola mihetsiketsika ihany ny Aterineto. Tamin'ilay trangam-pitifirana nataon'ny polisy vao haingana tao Qing'an, nampiaka-peo ireo mpisera maro amin'ny Aterineto, ary nahatonga teritery mafy ho an'ireo manampahefàna. Fantatr'izy ireo amin'izay fa tsy hampijanona ireo vahoaka tsy hilaza ireo heviny akory ny fanaovana hery famoretana amin'ireo mpitondra teny malaza, ny fanarahamaso henjana amin'ny sehatry natao ho an'ny daholobe ao amin'ny WeChat, na ny fametrahana ny rafitry ny tsy maintsy fametrahana ny tena anarana. […] Izany no antony mahatonga ny pôlisin'ny Aterineto miseho vahoaka amin'izao fotoana. Loza mitatao ho an'ireo mpisera amin'ny Aterineto mieritreritra ny hanao fandrahonana io, amin'izay ireo mpisera amin'ny Aterineto ihany no manao ny sivana amin'ny zavatra teneniny. Izany no tena zavatra tiana hatao ao ambadik'io fihetsiketsehana io.
Tsy faly amin'ilay fitsirihana atao ireo olon-tsotrampisera amin'ny Aterineto, saingy nananihany ihany ny maro. Naneho hevitra tamin'ny vazivavy ratsy ireo Shinoa mpisera amin'ny Aterineto , raha nilaza ny mombamomba azy ireo sy ireo asany tamin'ny Weibo “ny pôlisy Mpitsirika ny Aterineto sy Mpampihatra ny lalàna ao Chengdu”:
Sakafo voaendy tamin'ny menaka maloto, atody tratran'ny otrik'aretina Sudan I, vary voapoizin'ny Cadmium, rano voaloto, zavapisotro misy plastika, voankazo mipoaka, viratin-tsakafo misy Paraffine, Tofu vita amin'ny vovona talka, olatra fotsy asiana solifara, vovoka PM2.5 eny amin'ny rivotra, ireo jiolahim-boto sy ireo mpamaky entana, mpangalatra sy mpanendaka, samy tsy ahitan-doza tay daholo izy ireo. Ny Aterineto ihany no mampidi-doza.
Tsy eny ivelan'ny lalàna akory ny Aterineto – tsy mitombina io fomba fiteny io. Olona maro no efa nosamborina noho ny tsikera nolazainy tamin'ny Aterineto. Tsy ampy ve izany? Tianareo ary tsy mampihetsi-bolomaso anareo ry zalahy ilay mandainga an.
Voafitaky ny sehatra iray fifaneraserana tamin'ny Aterineto aho, tianareo sahanina ve izany? Very iray alina nitsangana fotsiny aho (izay ara-dalàna ve?), very ny findaiko, afaka sahaninareo ve izany? Nahazo entana sandoka tany amin'ny Taobao aho, afaka sahaninareo ve izany? Raha tsy afaka mamaha ireo olana ireo ianareo, aza miseho milay eran'ny tanàna.